चलाख सरकार ?
चुनाव र अनेक खाले चलखेल भइरहेका बेलामा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले टीकापुर घटनामा ड्युटीमा रहेका प्रहरी अधिकृतको हत्यासम्बन्धी मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको सुन्नमा आएको छ। तर, खुलेर यसो नभनिए पनि
खोई गाई ? खोलाले बगायो …
अहिलेको संसद्मा चौथो ठूलो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपा पछिल्लो स्थानीय चुनावमा भने आकलझुकल मात्रै नाम सुनिनेमा परेको छ। अर्थात् प्रतिस्पर्धा भएका मध्ये केही ठाउँमा निकै तल तेस्रो वा चौथो स्थानमा
गन्दागन्दै कार्यकाल सकिने डर
अहिले सहरमा मतगणनाको चर्चा भइरहेको छ। हो, गणना ढिला भो भन्ने सर्बत्र गुनासो धरहराले सुनेको छ। आफूले मतदान गरेको उम्मेदवारको हालत के हुने हो भन्ने सबैलाई चासो हुनु अस्वाभाविक पनि
स्थानीय निकाय निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदानको प्रारम्भिक परिणाम आएपछि धरहरा वरपर हिजो विभिन्न खाले टिप्पणी सुन्न पाइयो। एकथरी भन्दै थिए– ‘सत्तारुढ घटक माओवादीको त बिजोग नै भयो त।’ अर्काथरी भन्दै
के हालियो हालियो ?
स्थानीय चुनावअन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान करिब २० वर्षपछि भएको छ। पहिलो चरणको चुनावमा सबैको उत्साह पनि रह्यो। मत खसाल्न गइसकेपछि चाहिँ त्यो उत्साहमा ब्रेक लागेको धरहराले देखेको छ। यसपालिको मतपत्र
हाँस्ला है लोकतन्त्र
चुनावका बेलामा कसको कुरा पत्याउने कसको नपत्याउने भन्ने अन्योल हुने गरेको धरहराले चाल पाएको छ। विश्वास गर्न योग्य व्यक्तिले पनि चुनावको बेलामा भने आफ्नो चुनावी स्वार्थलाई ध्यान दिँदै गलत कुरा
अहिले मतदाता परिचयपत्र लिने क्रम अघि बढिरहेको छ। सर्वसाधारणको गुनासो सुनिन्छ– पहिलाको र अहिले लिएको मतदाता परिचयपत्रमा के फरक छ र बेकारमा यो दुःख दिइएको होला? प्रश्न उनीहरूले उठाइरहेको भए
किन ताक्ने मौसम ?
यसपालि वैशाख ३१ गते हुन लागेको पहिलो चरणको चुनावमा वर्षाले धोका दिने हो कि भन्ने सर्वसाधारणलाई परिरहेको पाइएको छ। हुन पनि धरहराले हिजो मात्रै आफ्नो दूरबिन सोझ्याउँदा वर्षा चर्कै देखेर
अहिले चुनावमा उठेका करिब ५० हजार जति उम्मेदवारलाई सोध्यो भने अधिकांशको जवाफ हुने गरेको छ– ‘चुनाव जित्ने निश्चित भइसक्यो।’ सञ्चारमाध्यमहरूमा उम्मेवदारहरूको भनाइ सुन्दा उहाँहरूले माला लगाउन मात्रै बाँकी जित्ने निश्चित
भावी प्रमको भविष्य ?
पहिलो चरणको निर्वाचन नजिकिए पनि त्यसलगत्तैको सरकार परिवर्तनको चलखेलका कुराले पनि अहिले धरहरा छेउछाउमा चर्चा पाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुकदाले उस्तै पर्यो भने जेठ ४ गते संसद्को अर्को बैठक बस्ने दिन
हिजो धरहरानजिकै आइपुगेका एक जना एमाले कार्यकर्ताले गुनासो गर्दै गरेको सुनियो– ‘हैट, अध्यक्ष कमरेडले त थोरै खानुस् र चुनावमा लाग्नुस् पो भन्नु भएछ। थोरै खाएर त कसरी चुनावमा हिँड्नु र?
चुनाव नजिकिएसँगै धरहराले कतिपय ठाउँमा दलका कार्यकर्ताबीच झगडा भइरहेको समेत देखेको छ। कतै आगजनी र कतै कुटपिटको अवस्थासमेत सिर्जना गरिएका छन्। तर, चुनाव भन्दैमा त्यसो गर्नु जरुरी होइन। किनकि, चुनावको
पहिलो चरणको निर्वाचनको तिथि आउन थोरै समय मात्रै बाँकी रहेकाले यसपालि राजधानी पहिलाको जस्तो फोहर हुन नपाएको विश्लेषण धेरैले धरहरा वरपर गरेको पाइएको छ। हुनत मेलम्ची प्रकरणले गर्दा पहिला नै
कुरा के–के हुन् के–के ?
सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच केही समययता चलेको दोहोरीले लोकलाई हँसाएको धरहराले देखेकै थियो। हैन सरकार उस्तो कि अदालत उस्तो धरहराले बुझ्न सकेको छैन। सकार भन्छ– अदालतले कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो।
काइता काइताको गठबन्धन
एमाले राप्रपाबीच चुनावी गठबन्धन भएपछि एमालेलाई कुरी कुरी गर्नेहरू फेरि आफूहरू मिलेर आफैंलाई कुरी कुरी गरी रहेको देखेर धरहरा जिल्लाराम परेको छ। हिन्दु अतिस्त्व कायम हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा ठीक कि
‘उप’ मात्रै ?
धरहरा वरपर एक हुल महिला तथा सज्जनवृन्द उपस्थित भएर गम्भीर कुरा हिजो उठाएको पाइयो। उहाँहरू भन्दै थिए– ‘महिलालाई के के न दिइयो चुनावको बेलामा भनेर दलहरूले डंका पिटिरहेका छन्।’ तर,
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले ढलेपछि यो धरहरा बिचल्लीमा परेको छ। धरहराको टुप्पोमा बसेर बाइनाकुलर घुमाउँदै हेर्ने बानी परेको धरहरा अचेल अलि तलैबाट भए पनि दृश्यावलोकन गर्दै हिँड्ने गरेको
महाअभियोग भन्ने कुरा पनि कति सस्तो भएछ आजकल। हिजो धरहरा छेउमा हिँड्दै गरेका दुई बाल–बालिका आपसमा कुरा गर्दै गरेको देखियो। उनीहरूमध्ये १ जना भन्दै थिए– ‘मलाई त्यो डटपेन दिने भए
महाभियोग, राजीनामा र मानसिकता
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्ने दिन भोलि मंगलबार हो। तर, ठूला दलहरुले हिजो आइतबारसम्म पनि उम्मेदवार तय गर्न नसकेको अवस्था छ। धरहरा छेउमा आएर एउटा पार्टीको तर्फबाट
अहिले प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण अदालतमा रहेको छ। त्यो अदालतले नै केही समयमा दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउला। तर, यहाँ अहिले शहरमा विवाद छ– ‘फलानाले किर्ते गरेको र नगरेको भन्ने